Topnews:- Kudladda Horusocod oo shuruudo adag ku xirtay Ansixinta Miisaaniyada 2017
Friday July 21, 2017 - 01:48:17 in Articles by Super Admin
Waagacusub.net - Xildhibaanada Xisbiga Horusocod ayaa Gudiga Maaliyada ee Baarlamaanka oo haatan gacanta ku haya dib u eegida Miisaaniyada 2017 ayaa ka dalbaday inay Miisaaniyadaa u soo badhigaan Shacabka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed si ay ula arka
Waagacusub.net - Xildhibaanada Xisbiga Horusocod ayaa Gudiga Maaliyada ee Baarlamaanka oo haatan gacanta ku haya dib u eegida Miisaaniyada 2017 ayaa ka dalbaday inay Miisaaniyadaa u soo badhigaan Shacabka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed si ay ula arkaan qaladaadka iyo ku takri falka ka muuqda Miisaaniyada 2017.
Xildhibaanada Xisbiga Horusocod ayaa hoosta ka xariiqaya in aanay marnaba ansixinayn Miisaaniyada inta wax laga bedelayo Qodobada kala ah;
1-In Somaliland lagu soo daro Miisaaniyada, arintaa oo astaan u ah Midnimada Dalka iyo Dadka soomaaliyeed
2-In Mushaarka Ciidamada si aad ah kor loogu qaado oo lala simo Mushaarka Shaqaalaha Rayidka ah.
3-In Xafiisyada Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha oo ay u qoran tahay lacag ka badan 11 Milyan oo Dollar si aad ah hoos loogu dhigo, lacagta laga dhimayna loogu daro Ciidamada Qaranka.
4-In Miisaaniyada lagu daro adeega shacabka loo qabanayo Sida Isbitaalo, Wadooyin, Iskuulo, Shaqo Abuur, Koronto, IWM
5-In Guddi loo saaro Daynta been abuurka ah ee la sheego in Dalka Somalia lagu leeyahay, lana hubiyo sida ay ku timid dayntaasi, waxa ay ku baxday iyo cidda qaadatay, waxaana muuqata inay tahay ifafaalo muujinaya inay tahay xirfad dalka lagu dhacayo.
6-In la cadeeyo Kororka dhaqaale ee Dalka ee ah 90% ee hore loo shaaciyey ee aan Miisaaniyadana ka muuqan.
7-In la cadeeyo lacagihii Dawladaha shisheeye bixiyeen isla markaana lagu soo cadeeyo Miisaaniyada
Xisbiga Horusocod ayaa ka codsaday Guddiga Maaliyadda ee Baarlamaanka inay Xaqiijiyaan wax ka bedelka Qodobadaasi si Miisaaniyada loo ansixiyo.
Waxaa xusid mudan in Miisaaniyada Dawladda ay soo bandhigtay anaanay haba yaraatee ku jirin wax ku saabsan Horumarinta Bulshada keliya Miisaaniyadu waa Mushaar, Guno, kiro, iyo Safaro kumana jiraan wax ku saabsan Horumarinta
Topnews:- Akhri Liiska isku shaandheeynta Wasiiradda cusub iyo kuwa xilalka waayey qabiiladooda ?
Warbaahinta Waagacusub ayaa heshay tiro Wasiiro ah oo seefta xilka qaadista haleeshay iyo kuwa cusub ee lagu bedelay xilalka laga qaaday ,waxeeyna kala yihiin sidaan inta la xaqiijiyay. Full Article
Topnews:- Wasiir ku kacay tilaabo geesinimo leh iyo tacadigii Flydubai
Waxaa qoray Cali Hassan (Cali Mareexaan), Wasiirka Howlaha Guud ee Somaliland. Full Article
Topnews:- Qatar iyo Taakulaynta Argagixisadda
Qatar Waa dawlad yar oo dadkeedu 300 oo kun yahay. Laakiin waxay leedahay dhaqaale aad u fara badan. Waxaa kaydkeeda dhaqaale lagu qiyaasaa 300 oo bilyan oo dollar. Waxay leedahay Gaas Dabiiciga kan labaad ee Aduunka ugu badan marka laga tago Ruushka. Sanadkii 1995 ayaa talada dalka waxaa Afganbi kula wareegay Sheekh Xamad oo ah odayga dhalay Amiirka hataan xilka haya ee Sheekh Tamim Bin Xamad. Sheekh Xamad wuxuu dalkiisa u jeexay siyaasad ka duwan siyaasadaha dawladaha kale ee Khaliijka. Si uu saamayn ugu yeesho loona maqlo magaca dalkiisa aadka u yar ee Qatar wuxuu ka hawl galay siyaasad labo dhinac ah. Full Article
Topnews:- Amisom oo hub siisay beel xasuuq ka wada Somalia ?
Waagacusub.net - Saraakiil ay ka mid yihiin Afhayeenka Amisom Jeneral Subagle oo u dhashay qabiilka Ciisaha Jibouti ee Dirta ayaa hub iyo gabaad siiyay Maleeshiyaad beesha Biyomaal u dhashay oo xasuuq baahsan kula kacay dad rayida oo u dhashay beelsha Hawiye. Full Article
Waagacusub.net - Dowladda Federaalka Somalia ayaa qorsheysay in 2,000 (Laba kun) qofood oo u dhashay beelo cayiman lagu kordhiyo shaqaalaha Dowladda Federaalka iyo maamulka Gobolka Banaadir. Full Article
Waagacusub.net Wasaaradda Haweenka iyo Arrimaha Xaquuqul Insaanka Dowladda Farmaajo ayaa boggeeda Internet-ka ku soo xayeysiisay jagooyin ka bannaan Guddiga Madaxa Banaan ee Xuquul Insaanka iyo sharuudaha qofka shaqa doonka ee soo codsanaya jagooyinkaas ku dartay qabiilkiisa iyo jufadiisa hoose . Full Article
Madaxweyne Farmaajo ayaa u sheegay Dowladda Uganda iney Ciidankooda jooga Somalia iska bixi karaan xilli kasta kadib markii uu Dowladda Ethiopia ka helay 50.000 oo ka tirsan Ciidanka Melleteriga dalkaas kuwaas oo caawa gaaray degaanka Leego ee gobolka Shabeeladda hoose ,sida ay Waagacusub u xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan Ciidanka Amisom iyo maamulka Shabeeladda hoose. Full Article
Waagacusub.net - Wasiirka Dastuurka Federalka Somalia Abuukaate Cabdi Xoosh ayaa shalay ka dhoofay Muqdisho isagoo diiday inuu hortago baarlamaanka Somalia oo su'aalo rabay iney weeydiiyaan. Full Article
Topnews:- Xildhibaan Dhuxulow iyo Gudoomiye Taabit oo rajo ka qabo kursiga Ra'isulwasaaraha "Socdaalkiisa Emirate-ka"
Waagacusub.net - Xildhibaan Mustafe Dhuxuloow oo ka mida seddexda qof ee daaha gadaashiisa ka maamula Xafiiska Ra'isulwasaare Xasan Kheyre ayaa safar degdega ugu baxay dalka Emirate-ka Carabta kadib markii sida la xaqiijiyay uu ku guuleeystay fashilinta Xukumadda Ra'isulwasaare Kheyre. Full Article
Akhri Xildhibaan Mahad Salad oo si adag uga jawaabay hanjabaadii Wasiirka Amniga ugu hanjabay ganacsatadda Muqdisho ?
DALKAAN LAGUMA MAAMULI KARO WAREEGTO IYO WARSAXAAFADEED! Full Article